Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh oo shaaciyay qolyaha ku shiraya Kismaayo in ay Shabaab siinayaan fursad ay wax ku sii qasaan. | Salaan Media
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh oo shaaciyay qolyaha ku shiraya Kismaayo in ay Shabaab siinayaan fursad ay wax ku sii qasaan.
Xassan Sheekh oo shaaciyay qolyaha ku shiraya Kismaayo in ay Shabaab siinayaan fursad ay wax ku sii qasaan.
Xassan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha jamhuuriyada federalka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka hor sheegay baarlamaanka Soomaaliya in shirka Kismaayo uu yahay mid dastuurka Soomaaliya aan waa faqsaneyn fursadna siinaya kooxda Shabaab.
“Shirka Kismaayo maaha mid wax wanaajinaya. Xumaan unbuu soo kordhinayaa hadii xumaan timaadana fursada ugu horesyo Shabaab ayaa helaya”, Madaxweynaha ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa.
Waxa uu intaa raaciyay, “Shabaabku waxa ay ka faa’iideestaan goobaha dadku isku fahmi waayaan waxaana cad shirka Kismaayo in koox gaar ah wadato aan in leesku fahmaahina aysan dhici doonin”.
Xassan Sheekh ayaa waxa uu ku nuux nuuxsaday in dowlada Soomaaliya marnaba aysan gor gortan ka geli doonin hanaanka geedi socodka nabada Soomaaliya iyo dastuurka ay u dhaarteen cid kasta oo qal qal gelineysana ay ka hor tegi doonaan.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay dowlada ugu baaqeen in dowladu cadeyso mowqifkeeda Shirka Kismaayo ee Kenya ay gadaal ka taagantahay.